सम्भोगमा प्राक्क्रीडाको के महत्त्व छ ?
जिज्ञासा : जे, हेटौँडा
यौनसम्पर्कका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार पार्न र यौन उत्तेजनामा ल्याउन महिला र पुरुषले एकापसमा गर्ने क्रियाकलापलाई प्राक्क्रीडा भनिन्छ। लिंग र योनिको सम्पर्कपूर्व गरिने यौनिक क्रियाकलाप नै प्राक्क्रीडा हो। यसले दुवै पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउन र एकापसको यौनिक मञ्जुरीनामा लिन पनि सघाउँछ।
प्राक्क्रीडालाई भौतिक क्रियाकलापका रूपमा लिए पनि यो हाउभाउ र शाब्दिक तवरमा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्राक्क्रीडाका लागि सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अर्थात्, आजकल इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अनलाइन च्याट, एसएमएस, फोन कलमा यौनाभूतिजन्य (फ्यान्टासाइज्ड) कुराकानी आगामी भेटका लागि प्राक्क्रीडाका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालका एक जना अनुभवी महिला यौन परामर्शदाताका अनुसार यौनको मामिलामा नेपालीहरू एकलकाँटे छन्। उनले ‘नेपालीहरू यौन सम्बन्ध राख्नै जान्दैनन्’ भनेर अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यौनलाई केवल सामान्य भौतिक क्रियाको रूपमा लिई हतार–हतारमा यौन सम्पर्क राख्न चाहने, हतारमै यौन क्रिया सिध्याउने, विशेषतः महिला पार्टनरलाई जाँगर छ÷छैन सोधपुछ नगर्ने, महिनावारी वा तल्लो पेटसम्बन्धी कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या पो भइरहेको छ कि वास्ता नगर्ने, यौन सम्बन्ध राख्न आफ्नो पार्टनर पनि उत्तिकै रोमाञ्चित छ÷छैन नसोधीकनै यौन सम्बन्ध राख्न खोज्ने, सधैँभरि एकै ढर्राको आसन (महिलामाथि पुरुष घोप्टिएर) मा यौन सम्बन्ध राख्ने, पुरुष पार्टनरले आफ्नो वीर्य स्खलनसँगै यौन क्रिया सम्पन्न भएको ठान्ने, पुरुष पार्टनरले यौन आनन्द प्राप्त गरेलगत्तै भित्तातिर फर्केर सुत्ने कार्य आम नेपालीको भएको कारणले गर्दा ती यौन परामर्शदाताले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्, जो सत्य हो। परापूर्वकालदेखि नै कामसूत्रका साथै कतिपय मन्दिर अनि कला सामग्रीमा विभिन्न खालका यौनिक अपिल एवं भावहरू समेटिएकाले भन्न सकिन्छ– पूर्वीय संस्कृतिले यौनलाई अत्यन्त महŒव दिएको छ।
महिला र पुरुषबीच यौनचक्रमा निश्चित रूपमा फरक छ। महिलालाई चरम सन्तुष्टिमा पुग्न लामो समय लाग्छ भन्ने कुरा पुरुष पार्टनरले थाहा पाउन जरुरी छ। पुरुषमा वीर्य स्खलनसँगै लिंगमा शिथिलता आउँछ र पुनः उत्तेजनामा आउन समय लाग्छ। महिलाले एउटै चक्रमा पनि पटक–पटक चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन्। प्राक्क्रीडाको मद्दतले महिला–पुरुष दुवैले अधिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्राक्क्रीडालाई नवीनता दिन विभिन्न तरिका हुन्छन्। युरोपतिर एउटा तरिका लोकप्रिय छ। पुरुष र महिला तास खेल्छन्। हार्नेले कपडा खोल्दै जान्छ र जित्नेले आफ्नो कुनै अंग विशेषमा मसाज गर्न लगाउँछ। नियमित घरायसी वातावरणमा हल्का परिवर्तन ल्याएर पनि यौन क्रियाकलापपूर्वको समयलाई रोमाञ्चक बनाउन सकिन्छ। साँझको खाना मैनबत्ती बालेर खाने, हल्का ड्रिंक्स गरेर रमाइलोपन थप्ने, यौनवद्र्धक भनिएका काजु, नरिवलजस्ता खाद्यवस्तु खाने र खुवाउने गर्न सकिन्छ। सुहागरातको दिन, खास गरी भारतमा नवदुलहीले दूधको गिलास बोकेर जानुको प्रतीकात्मक अर्थ छ।
सुत्ने बेलामा पारदर्शी वा रेसमी पहिरन लगाउँदा पनि यौनिक निरसता (मोनोटोनी) हट्न सक्छ। त्यस्तै यौन खेलौनाको प्रयोग वा आफ्नो पार्टनरको यौनका दृष्टिले शरीरका संवेदनशील अंगहरू चलाउने, चुम्ने, स्पर्श गर्ने कार्यले पनि साबिकको यौन क्रियाकलापमा नयाँ ज्यान ल्याउन सकिन्छ। यौन कल्पना वा कतिपय आसनको टिप्स लिन दुवै जना सँगै बसेर यौन साहित्य पढ्ने, भिडियो क्लिप्स हेर्ने कार्यले पनि यौन आलस्य हटाउन मद्दत गर्छ।
सफल यौन क्रिया यौनांगको मिलन मात्र होइन। प्राक्क्रीडाले यौनिक तŒवप्रधान मैथुनबाट संवेगप्रधान सम्भोग स्थापित गर्न सघाउँछ। यसले शारीरिक संरचनागत मात्र नभई प्रक्रियागत रूपमा पनि यौनलाई सफल बनाउँछ। साथै, पति–पत्नी वा प्रेमी–प्रेमिकाबीच विश्वास र सम्मानको वातावरण बनाउँछ। प्राक्क्रीडामा विशेषतः महिला पार्टनरले आफ्नो यौन असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर पाउँछन्। यसले गर्दा यौन कुण्ठा पाल्ने वा कालान्तरमा मानसिक समस्या हुने अवस्था आउँदैन। यौन क्रियाको क्रममा दुवै पार्टनरले चरम उत्कर्ष प्राप्त गर्नु प्रमुख कुरा हो। प्राक्क्रीडाले मात्र यस लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउँछ।
महिलाको तुलनामा पुरुषमा चरमसुखपछिको अवधि लामो हुन्छ। यस अवधिमा पुरुषलाई तुरुन्त यौन उत्तेजनमा ल्याउन तथा फेरि यौन क्रियाकलापका लागि तयार पार्न गाह्रो हुन्छ। यसको ठीक विपरीत महिला भने चरमसुखलगत्तै पनि पटक– पटक यौन उत्तेजनामा आई फेरि–फेरि चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन्। यौनांगको प्रत्यक्ष घर्षण हुनुपूर्व दम्पती नै प्राक्क्रीडामा संलग्न भएमा अत्यधिक यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छन्।
चेक गणतन्त्रमा २६ सय महिलाबीच गरिएको एक सर्वेक्षणले दुवै जनाले चरम उत्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि प्राक्क्रीडा मात्र नभई प्रत्येक पटकको यौन क्रियाको लागि दिइने अवधि पनि महŒवपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ। हतार वा क्षणभरमै राखिने यौन सम्बन्धले यौन आनन्द प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसै गरी, क्यानडामा गरिएको अर्को अध्ययनअनुसार महिला र पुरुष दुवै जना यौन उत्तेजनामा आउन अर्थात् मानसिक रूपमा यौन सम्बन्ध राख्नका लागि तयार हुन मोटामोटी १० मिनेट समय लाग्ने रहेछ। यसको मतलब यौन कार्य कदापि हतारको विषय बन्नु हुँदैन। र, स्वार्थ प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। प्राक्क्रीडा त्यस्तो माध्यम हो, जसले यौन क्रियालाई सफल, शानदार र आनन्दमय बनाउँछ।
०५ भदौ २०७७
कोरोना उपचारमा प्लाज्मा थेरापी निकै फलदायी
०२ भदौ २०७७
यौनमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
प्रौढावस्थाका यौन जटिलता
डा. सुबोधकुमार पोखरेल, वरिष्ठ यौन विशेषज्ञ
सिजन ३ को फाइनल आज : को बन्ला नेपाल आइडल
शुक्रबार, १२ भदौ २०७७